2014, 12 Volana Nampikorontana An’i Thailandy · Global Voices teny Malagasy
2014, 12 Volana Nampikorontana An'i Thailandy
Voadika ny 05 Janoary 2015 5:50 GMT
Miaramila mijoro miantrana ao ivelan'ny ivon-toeran'ny Zavakanto sy ny Kolontsaina taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny volana Mey 2014. Sary avy amin'i Hon Keong Soo, Fizakàmanana @Demotix (5/24/2014)
Hetsi-panoherana mahery vaika an-dàlambe, fanaovana an-kivy ny fifidianana, fitondrana amin'ny lalànan'ny tany misy hotakotaka, ilay antsoina hoe fanonganana “sambatra”, ny sivana amin'ny haino aman-jery sy ny tranonkala ary ny fiakaran'ny mpanongam-panjakana ho eo amin'ny fitondrana no niainan'i Thailandy tamin'ny taona 2014. ‘Ndao hiaraka hanao jery todika sy hijery ireo tantara nataon'ny Global voices izay nanamarika ireo hetsika goavana ara-politika tany Thailandy nandritra ny 12 volana :
Janoary: Olona an'aliny no nameno ny fihaonan-dàlan'i Bangkok satria nanamafy ny andrana hanongana ny governemantan'i Yingluck Shinawatra tamin'izany fotoana ireo vondron'ny mpanohitra. Nikatsaka ny ‘hanidy’ an'i Bangkok mandritra ny andro maro na mandra-pialan'i Yingluck amin'ny fitondràna ilay hetsika notarihin'ilay solombavam-bahoaka taloha, i Suthep Thaugsuban.
Febroary: Na teo aza ny fivorian'ireo tsy tia ny governemanta sy ny fanentanana nataon'ny mpanohitra mba ho fanaovana ankivy dia afaka nanao fifidianana ‘am-pilaminana’ ihany i Thailandy. Saingy maro ny Thais no tsy afaka nifidy na voasakana tsy hanatona ny biraom-pifidianana noho ny hetsika. Vinavinaina ho eo amin'ny 12 tapitrisa eo ny isan'ireo tsy afaka nanatanteraka ny zony.
Martsa: Nofoanan'ny Fitsarana Avo momba ny lalàm-panorenana Thai ilay fifidianana tamin'ny volana Febroary tamin'ny filazana fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana satria tsy andro iray no nanaovana ny fifidianana nanerana ny firenena.
Aprily: Mbola mitohy ireo hetsika an-dàlam-be mitaky ny hialan'ny governemanta tetezamita tarihan'i Yingluck. Voatery nametra-pialàna izy rehefa namoahan'ny fitsarana didy ny volana manaraka an'io ho nanao fanararaotam-pahefana tamin'ny 2011 rehefa nanolo ny lehiben'ny fiarovam-pirenena tamin'ny iray amin'ny fianakaviany.
Mey: Roa andro taorian'ny fanambarana ny lalàna mifehy ny tany misy hotakotaka sy ny tsy fahombiazan'ny fanelanelanana teo amin'ireo hery politika mpifanandrina, dia nanao fanonganam-panjakana ny Royal Thai Army ny 22 Mey, nahantona ny lalàm-panorenana tamin'ny 2007 ( afa-tsy izay mahakasika ny fitondran'ny mpanjaka), nofehezina ny ankamaroan'ny ivon-toeran'ny haino aman-jery manana ny lanjany ary nodidiana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina. Io no fanonganam-panjakana faha-12 tany Thailandy ; fa maherin'ny 20 raha isaina ireo fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny taonjato lasa.
Maka sary ny tenany miaraka amin'ny miaramila vehivavy eo amin'ny tsangambaton'ny Fandresena ao Bangkok ireo mpanohana ny fanonganana. Sary avy amin'i Yostorn Triyos, fizakàmanana @Demotix (6/8/2014)
Jona: Ny fandraràna ny fivorian'ny olona dimy na mihoatra no iray amin'ireo baiko voalohany navoakan'ny fitondrana mpanongana. Fa tsy nahasakana ny mpanohitra ny mpanongana tsy hivory amin'ny toerana samihafa izany, tsy nahalefitra intsony ny tafika tamin'ireo hetsika ireo ka nisambotra ireo izay nandika io lalàna io. Fa saingy nahita fomba vaovao hanehoana ny fanoherany toy ny fiarahabana amin'ny fananganana ny rantsana telo avy amin'ny sarimihetsika Hollywood ‘Hunger Games’ ho dikan'ny fanirian'ny vahoaka ho amin'ny ” fahafahana, fitoviana, ary firahalahiana’ ireo mpanohitra.
Jolay: Namoaka didy vaovao mandrara ny haino aman-jery tsy hitatitra ny vaovao manakiana ny governemanta ny mpanongam-panjakana. Nilaza avy hatrany ny ahiahiny momba ny fahalalahana sy ny fanjavozavoan'ny fepetra ny vondron'ireo haino aman-jery. Notsindrian-dry zareo ihany koa ny sazy henjana – fanenjehana araka ny lalàna, sivana ary fanakatonana – ho an'izay mandika na dia kely aza amin'io baiko io.
Aogositra: Namoaka lalàm-panorenana vonjimaika ho ampahany amin'ny tondrozotra amin'ny fiovàna demokratika ao amin'ny firenena ny Filankevitra Nasionaly momba ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana, ny anaran'ny governemantan'ny tafika mpanongana. Saingy asongadin'ny tsikera fa natao hisian'ny fitondrana jadon'ny tafika mandrakizay ilay sata vaovao. Nofidian'ny Solombavam-bahoaka mpanao lalàna ho Piraiminisitra faha-29 ny Jeneraly Prayuth Chan-ocha noho io làlam-panorenana io.
Septambra: Tena nanahirana ny governemanta tohanan'ny tafika nanoloana ny vondrona iraisam-pirenena ny fahafatesan'ireo britanika mpanao dia an-tongotra, Hannah Witheridge sy David Miller, tany amin'ny torapasika fialantsasatry ny nosy Koh Tao. Nampangaina ho nanembantsembana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana taorian'ny tsy nahasamborana ireo olona ahiana sy ny fametrahana fitoriana araka ny tokony ho izy tany amin'ny fitsarana.
Mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fanonganana mampiseho ny mariky rantsana telo tao Skywalk akaikin'i Ivon-toeran'ny Zavakanto sy ny Kolontsaina ao Bangkok. Sary avy amin'i Yostorn Triyos, Fizakàmanana @Demotix (6/1/2014)
Oktobra: Efa volana maro izay no nodidiana ny mpianatra mba hitadidy ireo ‘Soatoavina fototra 12 ” an'i Prayuth izay mifantoka amin'ny fanarahan-dalàna sy fanajàna ny manampahefana. Mpianatra maromaro no sahy nanohitra io fanavaozana io sy ny fanovàna ny sasany tamn'ny fandaharam-pianarana izay nolazain-dry zareo fa notanterahana tsy nakàna ny hevitry ny vahoaka. Ny fanavaozana iray hafa antsoina hoe fampianarana “demokrasia tena izy” dia ny fanitsiana ny bokin-tantara izay nolazaina fa tsy ahitàna intsony ny anaran'ny Piraiminisitra ateo aloha Thaksin Shinawatra.
Novambra: Marika hafa fanampiny nampiasa saina momba ny sivana: nangatahan'i Prayuth ny haino aman-jery mba tsy hitatitra izay hetsika ataon'i Thaksin sy Yingluck, nosoloana ny mpanentana iray tao amin'ny fahitalavitra satria tsy nankasitrahan'ny mpanongana ny fanehoankevitra miaty tsikera nataony momba ny governemanta, noraràna tsy azo alefa any amin'ny efitrano malalaka sasany ilayy sarimihetsika ‘ Hunger Games’ ary nisy voasambotra noho ny fiarahabana amin'ny rantsana telo ireo mpanao hetsi-panoherana.
Desambra: Nisaraka tamin'ny vadiny fahatelo ny Printsy mpandova fitondrana Maha Vajiralongkron, ny Printsesa Srirasmi, izay nampiparitaka honohono momba ny fifandimbiasam-pitondrana amin'ny mpanjaka sy ny fiantraikan'izany amin'ny politika ao an-toerana.
Tena taon-tsarotra tamin”i Thailandy ny 2014. Antenaina hitondra fanavaozana sy demokrasia misongadina kokoa ho an'ny firenena ny taona vaovao.